Mogadishu Journal » 2021 » October » 26
WAR-SAXAAFADEED Muqdisho – Saaxiibada Beesha Caalamka ayaa ka walaacsan dagaalka ka socda magaalada Guriceel ee Dowlad Goboleedka Galmudug. Colaaddu ma aha oo kaliya mid sababaysa dhibaato bini’aadanimo oo ku dhacda dadka deegaanka, ee waxay sidoo kale tubta ka leexinaysaa...
Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqday xarunta Nabad sugida Qaranka ee NISA (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Somalia Rooble ayaa galabta kormeeray Xarunta Hey’adda NISA ee Habar Khadiijo, halkaasoo uu ku soo dhoweeyay Ku simaha Taliyaha NISA Yaasiin Farey. Rooble waxaa kormeerkiisa ku wehliyey oo Wasiirka Amniga Gudaha iyo xubno kale Ra’iisul Wasaaraha Somalia ayaa...
(Akhriso) Natiijada doorashadii ka dhacday degaano ka tirsan Puntland oo la shaaciyey
Guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland, Guuleed Saalax Barre ayaa ku dhawaaqey natiijada doorashada Golaha Degaanka ee degmooyinka Ufeyn, Qardho iyo Eyl Puntland. Doorashadan ayaa loo dareerey 25-kii bishan Oktoober, oo ku beegneyd Maalintii shalay, waxaana ku tartamay xisbiyo...
Dagaalka u dhaxeeya Ciidamada dowlada federaalka ay wehliyaan kuwa maamulka Galmudug iyo xooga Ahlu Sunna ee wali ka socda magaalada Guriceel ayaa dhaliyay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalka waxaa ku dhintay dadka badan 50-qof oo u badnaa dhinacyada...